War deg deg ah Madaxweyne Xassan Sheikh iyo David Cameron oo wada hadal qaadanaaya – idalenews.com
War deg deg ah Madaxweyne Xassan Sheikh iyo David Cameron oo wada hadal qaadanaaya
Iyadoo uu shir Ballaaran xiligaani ka socda Magaalladda London ee Cariga dalka Britain, ayaa waxaa Kulan gaar ah Xiligaani u socdaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan Sheikh Maxamuud iyo Ra’isul wasaaraha dalka Britain David Camiron.
Shirka labada Mas’uul ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii uu Shirka joogsaday iyadoona Madaxda ay qaadanaayan Wakhti Nasitaan ah, waxaana Wakhtigaasi ka faa’iideysanaaya Madaxweyne Xassan iyo David Camiron oo isla meel dhigaaya Qodobo muhiim ah oo looga baahan yahay in Shirka laga sheego.
Camiron, waxa uu Xassan Sheikh ku dhiiri galinaaya inuu si aan ganbasho laheyn uu carabka ugu dhufto Waxyaabaha lidka ku ah Ammaanka Somalia oo kaga imaanaya Dowladaha dariska la’ah Somalia, maadaama ay Xiligaani meel qura wada joogaan.
Wararka naga soo gaaraya London ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi uu David Camiron ku wehliyo Xoghaya Arrimaha Dibadda Britan, waxaana kulankaasi lagu dhiiri galinaaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia si uu Khudbadiisa diirada ugu saaro Dhanka Ammaanka maadama ay Britain u aragto in Dowladda Kenya ay faragalin ku heyso Somalia.
Dhanka kale, Kulanka labada Mas’uul ayaa waxa uu yahay mid Wakhti yar ah oo u muuqata inay isu dhaafsanaayan Xogta Khudbooyinkii Horu dhaca ahaa oo Hoolka laga jeediyay.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Britain ayaa waxa ay muujineysaa Dadaalo hagar la’aan ah oo lagu doonaayo in wixii ka dambeeya Shirka London laga hirgaliyo Dowladaha Dariska la’ah Somalia.
Banaanbax aan horay loo arkin oo Xiligaani ka socda Magaalladda Muqdisho
KHUDBADII MADAXWEYNE XASAN SH XAMUUD EE SHIRKA LONDON